လူငယ်တို့ကလေးတွေအစာကျွေးဖို့ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကချိုချဉ်နှင့်ရေခဲမုန့်ကိုတောင်းနှင့်တကွလူအပေါင်းတို့အသုံးဝင်သောနှင့်အာဟာရအရှုံးမပေးစေနိုင်သည်။ နိုင်ငံအများအပြားအတွက်ဟိုတယ်နှင့်စားသောက်ဆိုင်မကြာခဏပင်အများဆုံး capricious သူငယ်၏အစာစားချင်စိတ်နှိုးမည်အကြောင်းအထူးသားသမီးရဲ့ menu ကိုဆက်ကပ်။ Level.Travel အထူးကု, အွန်လိုင်းရုရှားနိုင်ငံ 20 ကျော်ဦးဆောင်ခရီးစဉ်အော်ပရေတာအနေဖြင့်ခရီးစဉ်ရောင်းချခြင်းအပေါ်ဝန်ဆောင်မှု, အမြိုးသားအပေါငျးတို့သအရသာပုံပေါက်ရှိရာဒေသများ၏စာရင်းကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
ရုရှားကကမ်းလှမ်းချက်ကိုသားသမီးတို့အဘို့အစားအစာနေရာတိုင်းသည်မဟုတ်, သင်သူငယ်များအဘို့တစ်ဘူဖေးစတင်သုံးစွဲခြင်းသို့မဟုတ်သီးခြားသားသမီးရဲ့ menu ကိုအရပ်၌ Sochi ဟိုတယ်များအတွက်လုပ်ဖို့အမှုအရာရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ကလေးကအရမ်း capricious မပါလျှင်မည်သို့ပင်ဆို, ကဖီးအတွက်စားရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ရုရှအီတလီ, ဂျြောဂြီယနှင့်အတူ Sochi ကျောင်းများများစွာနှင့်တစ်ဦးသားသမီးရဲ့ menu ကဂျပန်အစားအစာအလွန်တတ်နိုင်စျေးနှုန်းများမှာပင်ရှိသေး၏။ ထိုသို့သောကြက်သားဟင်းချို, mini-ဘာဂါ, ပီဇာ, ကြက်သားနှင့်ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းနှင့်အတူခေါက်ဆွဲ, mashed အာလူးနဲ့ milkshakes အဖြစ်ပူဇော်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါရိုင်း၏ဘော်ဒါအိမ်များပိုမိုကျိုးနွံအစားအစာများ။ ကလေးများသုပ်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည် - တစ်ဂေါ်ဖီထုပ်သို့မဟုတ်ခရမ်းချဉ်သီး, ကြက်သားနှင့်ဒိန်ခဲဟင်းချို, မုန့်ငံပြာရည်အတွက် meatballs, Mini-ပီဇာနှင့်မီးဖုတ်ထားသောပန်းသီး။ သငျသညျနေ့ကိုအလယ်၌ကမ်းရိုးတန်းအနီးကဖီးမှကမ်းခြေသို့မဟုတ်အသီးသွားလာရင်းစားနိုင်ဘယ်မှာလည်းစနစ်နှင့်အတူမိသားစုအားလပ်ရက် option ကိုများအတွက်သင့်လျော်သော "မနက်စာနှင့်ညစာ" ။ ထို့ကြောင့်အစားအသောက်များတွင်ပျမ်းမျှအားအမျိုးအစားများ၏အားလပ်ရက်ဟိုတယ်စည်းကမ်းအဖြစ်, ခရီးသွားဧည့်ဟင်းလျာများ၏စံသတ်မှတ်ချက်ကိုကမ်းလှမ်းနေကြတယ်, အရာအတွက်မရွေးနေသည်အထူးသဖြင့်လျှင်, ပိုမိုကွဲပြားခြားနားဖြစ်လာသည်။ ရုရှားအပန်းဖြေစခန်းမှာနှစ်ခုအစားအစာများနှင့်အတူဤခရီးစဉ်အတွက်အားလုံး Inclusive စနစ်ဗားရှင်းထက်အများကြီးစျေးသက်သာသည်။
လေယာဉ်ခရီးစဉ်များနှင့်နေရာထိုင်ခင်းနှင့်အတူ, ဒါပေမယ့်မရအစားအသောက် - သြဂုတ်လစျေးနှုန်းတစ်ဦးနှစ်ဦးနှစ်ကကလေးနဲ့အတူမိသားစုများအတွက်ရုရှားအပန်းဖြေဖို့တစ်ပတ်ကြာခရီးစဉ် 32 000 ရူဘယ်ထဲကနေစတင်သည်။
တူရကီနိုင်ငံအတော်များများမိသားစုများအထူးတိုင်းပြည်အတွင်းဟိုတယ်အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်မှာပူဇော်သမျှ Inclusive အစားအစာ system အတွက်သွားပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်မိဘများအဆက်မပြတ်ကလေးများလတ်ဆတ်သောအသီးအနှံနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အစာကျွေးရန်ရှိသည်အဖြစ်နေ့လယ်စာနဲ့ညစာ, ကြက်သား, အမဲသားသို့မဟုတ်ငါးအဘို့ရွေးရန်။ ပိုစျေးကြီးဟိုတယ်ကြောင်းသတိရသည်ခရီးစဉ် purchasing အသုံးပြုပုံပိုကောင်းနှင့်ပိုပြီးကွဲပြားခြားနားကြောင့်မီနူးဖြစ်လိမ့်မည်။ ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာသုံးဆောင်ဘို့စားသောက်ဆိုင်များ, high-level ကိုအပန်းဖြေစခန်းထဲမှာဆိုင်နှင့်အိမ်လုပ်ဒိန်ချဉ်, စီရီရယ်နှင့် muesli အမျိုးမျိုးနှင့်သစ်သီးဖျော်ရည်ဗီတာမင် bar မှာသွန်းလောင်းနိုင်ပါတယ်အမြဲရှိပါတယ်။ သား၏အစားပွဲခုံမှာကျယ်ပြန့်နိမ့်အဆီအသားနှင့်ငါးဟင်းလျာများ၏ရွေးချယ်မှုအဖြစ်ဟင်းချိုနှင့်ဟင်းရည်ဖြစ်လိမ့်မည်။ အဆိုပါပြုတ်အစားအစာ Blender ဖို့ Next ကိုမိဘများကသူတို့ကလေးစားစရာဘို့ pulverized ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ အံ့အားသင့်စရာကလေးများနှင့်အချိုပွဲအနေနဲ့ဌန် - သူတို့ကင်းရိုးရာတူရကီသကြားလုံးကနေမျိုးစိတ်များစွာဖြစ်နိုင်ပါသည်။ တူရကီလိမ္မော်သီး, အစိမ်းနှင့်အနီရောင်ပန်းသီး, Plum, စတော်ဘယ်ရီ, စပျစ်သီးနှင့်အချယ်ရီ: အစားအသောက်များတွင်မဖြစ်မနေနဲ့အသီးအပွပါဝင်သည်သငျ့သညျ။ မလုံလောကျသောဟိုတယ်လျှင်, သင်ဒေသခံဟင်းသီးဟင်းရွက်ဈေးကွက်လမ်းလျှောက်နိုင်ပါတယ်။ စကားမစပ်, သင့်ရဲ့စာရွက်များအတွက်အများဆုံးတောင်းဆိုမှုများရှိကလေးများကလေးအစားအစာသာသနာကိုဝန်ဆောင်မှုအချို့ဟိုတယ်များပါ။ သင့်ရဲ့အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာဒါမှမဟုတ်ရေကူးကန် - ထိုအခါအစားအစာများသင့်ရဲ့ Pre-သတ်မှတ်ထားသောအရပ်မှကယ်နှုတ်တော်မူ၏။ ထိုအခါမီးဖိုချောင်သားသမီးရဲ့ကလပ်အတွက်မီးဖိုနားမှာရပ်, ဒါပေမယ့်စည်းကမ်းအဖြစ်, တူရကီဟိုတယ်များရှိလူအနည်းငယ်ကသာတစ်ဦးလိုအပ်ဖြစ်ပါတယ်နိုင်ပါတယ်။
လေယာဉ်နှင့်အတူစနစ်အားလုံး Inclusive များအတွက်နေရာထိုင်ခင်းနှင့်အစားအသောက် - သြဂုတ်လများတွင်နှစ်တစ်နှစ်ကလေးနဲ့အတူမိသားစုများအတွက်တူရကီဖို့တပတ်ကျော်ကြာခရီးစဉ်၏စျေးနှုန်းမှာ 45 000 ရူဘယ်ထဲကနေစတင်သည်။
သားသမီးရဲ့အရသာများ၏မတူကွဲပြားသော်ငြားခေါက်ဆွဲကိုမချစ်တဲ့သူကလေးတစ်ဦးကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲသည်။ အဘယ်အရာကိုအီတလီနိုင်ငံမှသာခေါက်ဆွဲကိုတက်မလာဘဲ! ဤသည် spaghetti နှင့် fettuccine နှင့်ပင် Mini-ဖက်ထုပ် ravioli ။ နှင့်ဝက်အူချောင်းနှင့်ဖြည့်ပါအမျိုးမျိုးနှင့်အတူ - ခရမ်းချဉ်သီးများနှင့်အသား မှစ. , မုန့်နှင့်ပင်လယ်စာဖြစ်သည်။ ဒါဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအများဆုံးအရသာဖြစ်စဉ်းစားသောအချိုပွဲကလေးကနာမည်ကြီးအီတလီရေခဲမုန့်, အဘို့အမိန့်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ ကြွင်းသောအရာများအတွက်အီတလီနိုင်ငံရွေးချယ်ရာတွင်သောအခါ, အရှိဆုံးဟိုတယ်များမှသာသူတို့ရဲ့ဧည့်သည်များနံနက်စာပူဇော်ကြောင်းစိတ်တွင်ဘွားမြင်ရပါမည်: တစ်စိုးမိုးရေးအဖြစ်ခရီးသွားဧည့်စားသောက်ဆိုင်ထဲမှာစားသောက်။ အီတလီနိုင်ငံမှခရီးချစ်ခြင်းမေတ္တာသခွားသီးနှင့်ခရမ်းချဉ်သီးမှစတင်ပြီးနောက်ယခင်က, သုပ်မစားဘဲနေခဲ့ကြသူမြားစှာကလေးတွေ။ ထို့အပြင်အချို့ parmesan နှင့် mozzarella ၏အရသာကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်စတင်ကြဘူး။ ထိုအပင်ကိုပိုထို့ကြောင့်ကလေးများသည်ဒေသခံအသီးအပွကွဲကွာနေရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး - သင်ချယ်ရီသီး, လိမ္မော်သီးနှင့်စတော်ဘယ်ရီနှင့်အတူကမ်းခြေပေါ်မှာတစ်နေ့လုံးဖြုန်းနှင့် spa အဆောက်အဦ၏တဦးတည်းအတွက်ညစာစားနိုင်ပါတယ်။ အထွေထွေအားလပ်ရက်ကနေပြန်လာပြီးနောက်ထိုသူငယ်, နေ့လည်စာများအတွက်အထူးအချို့ minestrone သို့မဟုတ်ခေါက်ဆွဲတောင်းဆိုစတင်ကြောင်းဖွစျနိုငျ "အီတလီမှာလိုပဲ။ "
သြဂုတ်လအတွင်းကတစ်ဦးနှစ်ဦးနှစ်ကကလေးနဲ့အတူမိသားစုများအတွက်အီတလီနိုင်ငံမှစျေးနှုန်းရက်သတ္တပတ်ခရီးစဉ် 66 000 ရူဘယ်ထဲကနေစတင်သည် - လေယာဉ်, နေရာထိုင်ခင်းများနှင့်မနက်စာအတူ။
တူနီးရှားမှာရှိတဲ့ဟိုတယ်များတွင်လည်းမကြာခဏစနစ်အားလုံး Inclusive အပေါ်အစားအစာများရန်ဖိတ်ခေါ်ထားသည်။ သို့သော် menu ကိုဒေသခံအချက်အပြုတ်အစဉ်အလာမှချိန်ညှိပါလိမ့်မည်, ဒီတော့ကလေးသူငယ်အခမိမိအရသာမြားကိုရှေးခယျြဖို့အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောဟင်းလျာများကြိုးစားကြရပါလိမ့်မယ်။ စားသောက်ဆိုင်နှင့်မတူဘဲအချို့သောအကြောင်းပြချက်များအတွက်ပန်းကန်ပေါ်ကျန်ရစ်ခဲ့သောအစားအစာ, အဘို့ပေးဆပ်ရန်ရှိသည်မည်မဟုတ်, ဤအကြောင်းကြောင့်သဘောစနစ် "အားလုံးပါဝင်နိုင်" အဆင်ပြေပါတယ်။ သို့သျောလညျးကိုကြီးစွာသောအမျိုးမျိုးမှသာအဆင့်မြင့်ဟိုတယ်များတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သောအစားအသောက်များတွင်အစားအစာများကဲ့သို့သောကြီးတွေချက်ပြုတ်နှင့်အရသာနိုင်သူတစ်ဦးထမင်းချက်, အဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးပြီးအခြေခံအဆောက်အဦများအကျင့်နှင့်ရှုပ်ထွေးသောနှင့်အသုံးဝင်သောအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ သား၏အ Menu ထဲမှာ, သင်မြင်ဆန်, အာလူးပြုတ်နှင့်ရေနွေးငွေ့သို့မဟုတ်လှော်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနိုင်ပါတယ်။ ဖုတ်နှင့်သုပ်အမျိုးမျိုးနီးပါးဘာမျှမမိဘတွေကိုတရားစွဲဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ပိုအမွှေးအကြိုင်ကိုရွေးချယ်နိုင် - အသားလည်းငါး, ငွိမျး။ ဒါ့အပြင်အသီးမျိုးစုံအတွက်တူနီးရှားဟိုတယ်များပါ။ ကလေးမွေးကင်းစများအတွက်စားနပ်ရိက္ခာနှင့်သူတို့နှင့်အတူသယ်ဆောင်ရန်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး - အားလုံးဒေသခံဆေးဝါးရောင်းချကလေးငယ်များအတွက်စင်ကြယ်သောနဲ့အတူအိုးတလုံး။ သို့သျောလညျးကအားလုံးကိုဟိုတယ်များမှာသားသမီးမယ့် menu ကိုရှိကွောငျးသတိပြုသင့်ပါတယ်။ ထိုကွောငျ့, တစ်ဦးခရီးစဉ်ရွေးချယ်ရာတွင်ကြောင့်သင်တစ်ဦးအားလပ်ရက်ဖြုန်းဖို့သွားကြသည်ဘယ်မှာရှိနိုင်ပါဘာအကြောင်းပိုမိုသိရန်လိုအပ်ပေသည်။
လေယာဉ်နှင့်အတူစနစ်အားလုံး Inclusive များအတွက်နေရာထိုင်ခင်းနှင့်အစားအသောက် - သြဂုတ်လများတွင်နှစ်တစ်နှစ်ကလေးနဲ့အတူမိသားစုများအတွက်တူနီးရှားဖို့တပတ်ကျော်ကြာခရီးစဉ်၏တန်ဖိုး 84 000 ရူဘယ်ထဲကနေစတင်သည်။
အဆိုပါကလေးသည်ဆန်ကိုစားလိုဘဲနေရသနည်း ဒါကြောင့်မိဘများရိုးရိုးကချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုသိကြဘူး! စပိန်မှာကိန်းဂဏန်း - paella ၏အဓိကပါဝင်ပစ္စည်း, နာမည်ကြီးပင်လယ်စာဟင်းလျာများဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလုံခြုံစိတ်ချစွာမိသားစုတစ်စုလုံးအဘို့အမိန့်ထုတ်ခံရနိုင်သည်, နှင့်ကလေးများအမြဲသူတို့ကြိုက်နှစ်သက်အရာကိုကြီးမားတဲ့ပန်းကန်ကိုဖမ်းနိုင်ပါလိမ့်မည် - ပြည်ကြီးငါး, ပုစွန်သို့မဟုတ် mussels ။ တိရိစ္ဆာန်များ, ခွေး, ပြင်သစ် fries သည်ထောင့်အပေါ်ကိုအခြားအစာရှောင်ခြင်းအစားအစာကမ်းလှမ်းမှုကို၏နှုတျသီးနှင့်ပိုမိုအစဉ်အလာပီဇာကလေးတွေ။ အလားတူသင်တန်းများကိုသား၏အစားသောက်ဆိုင်မီနူးမှာတွေ့ရှိရသည်။ မိဘမြားစှာဒေသခံအစားအစာမှကလေးများမိတ်ဆက်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အားလုံးနီးပါးသင့်လျော်သောခရမ်းချဉ်သီးဟင်းချို gazpacho ။ သို့ရာတွင်ထိုသို့သိပ်အအေးမရအမိန့်ထုတ်သင့်သည်။ ဒါဟာလတ်ဆတ်တဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏တစ်ဦးသုပ်နှင့်အတူအရေးပါတယ်လို့များနှင့်အာလူး omelette ပုံရသည်, သို့မဟုတ်ကိန္နရီအတွက်ဒါခေါ် "အာလူး '- ဆားရေထဲမှာပြုတ်ပြီးတော့ဥဖုတ်။ အတော်များများကလေးတွေ bechamel ငံပြာရည်နှင့်အတူထိပ်ဆုံး, အသားနှင့်အတူကျပ် pancakes ကိုချစ်ပြီးဒိန်ခဲနှင့်အတူဖြန်း။ သို့သော်အချိုပွဲအဘို့, သငျသညျ caramel soufflé "ကာတာလမုန့်" ဒိုးနက် "bunols" သို့မဟုတ်အများအားဖြင့်ပူပြင်းတဲ့ချောကလက်၌နှစ်ပြီးသောသော cookie ကို "churros" ရွေးချယ်နိုင်သည်။ စပိန်၏အမျိုးမျိုးသောပြည်နယ်များမှာသူတို့ရဲ့အချက်အပြုတ်အစဉ်အလာ, ဒါကြောင့်သင်ကန့်ညက်အမိန့်သွားကြသည်ကိုအတိအကျအဘယ်အရာကိုအသေးစိတ်ထွက်ရှာတွေ့မှအစဉ်အမြဲ သာ. ကောင်း၏။
သြဂုတ်လမှာတော့တစ်ဦးနှစ်ဦးနှစ်ကကလေးနဲ့အတူမိသားစုများအတွက်တစ်ပါတ်မှုအတွက်စပိန်နိုင်ငံမှခရီးသွားကုန်ကျစရိတ် 97 000 ရူဘယ်ထဲကနေစတင်သည် - လေယာဉ်, နေရာထိုင်ခင်းများနှင့်မနက်စာအတူ။
ရေကန် Turgoyak - ကြွင်းသောအရာ Savage
ဘာလီကျွန်းများတွင် Surf စခန်း
မော်စကို Poklonnaya ဟေးလ်
Baursaks - စာရွက်
Multivarka function ကိုမီးသင်္ဘော
Bifidobacteria - မူးယစ်ဆေးဝါးများ
တက်ဘလက် incontinence ဝမ်း
Extension ကိုလက်သည်း 2016 ၏ဒီဇိုင်း
မေမေစီရော်နယ်ဒိုသည်သူ၏ဒုတိယဖခင်ဖြစ်ကြောင်း ပတ်သက်. ကောလာဟလများကိုငြင်းပယ်ထားပါတယ်
"ငှက်ရဲ့နို့" - အိမ်မှာကိတ်မုန့်, ​​သကြားလုံးများနှင့်ကိတ်မုန့်များအတွက်ချက်ပြုတ်နည်းများ
Pancakes ၏ Kurnik